नेपाल कहाँ पछि पर्यो? | Hamro Khelkud
नेपाल कहाँ पछि पर्यो?
कुचिङ (हाम्रो खेलकुद) – एएफसी सोलिडारीटि कप अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालले शनिबार टिमोर लेस्टेसंग गोलरहित बराबरी खेल्यो।
पहिलो खेलमा ब्रुनाईसंग ४-०को पराजय भोगेको टिमोरले नेपालको आक्रमक खेललाई पाखा लगाउँदै एक अंक चोर्न सफल रह्यो। नेपाल के कारणले बराबरीमा रोक्न पुग्यो, हेरौं केहि कमजोर पक्ष:
१. कमजोर फिनिसिङ
पहिलो हाफको सुरुवातमै नेपालले केहि राम्रो अवसर पाएको थियो तर नवयुग श्रेष्ठले सहि निर्णय लिन नसक्दा नेपलले अग्रता बनाउन सकेन। नवयुगको राष्ट्रिय टोलीको जर्सीमा यस खेल बिर्सनलायक रह्यो। भरत खवासले पनि एक-दुई गलत निर्णय गर्नाले टिम शुन्य गोलमै अड्कियो।
२. खराब परिवर्तन
अन्जन विष्टको ठाउँमा अनिल गुरुङलाई मैदानमा छिराउनु पनि खराब निर्णय सावित भयो। उमेरले नेटो काटिसकेका गुरुङले खेललाई अगाडि नबढाएर झनै ढिलाइ गरिदिए। उनले पाएको केहि मौकामा पास नदिएर आफैं अवसर बनाउन खोज्दा टोलीले गोल निकाल्न सकेन।
नेपालले स्वदेशमा हुँदा सधैं एष्ट्रो टर्फमा मात्र प्रशिक्षण गरिरह्यो र मलेसियामा केहि दिन मात्र गरेको प्रशिक्षण उचित भएन। मैदानमा केहि असजिलो महसुस गरिरहेकाले खेलाडीहरुले सहि समयमा सहि निर्णय पनि लिन सकेनन्।
विशाल राई पुर्ण फिट नहुनु नेपालको लागि निकै घाटाको विषय रह्यो। साग र बंगबन्धुमा राम्रो प्रदर्शन गरेका उनले लाओस विरुद्ध पनि गोल गरेका थिए। उनको अनुपस्थितिमा हेमन गुरुङले खासै राम्रो प्रदर्शन देखाउन सकेनन्।